China BLN5560 Fasia Firaisana ivelany Fanodinana BLDC Motor ary fanamboarana | Staba
BLN5560 Fascia Gun ivelany rotor BLDC Motor
Anaran'ny vokatra: Fascia Gun Outer Rotor BLDC Motor
Isaina fahefana: 37W
Haingam-pandeha: 3111 RPM
Toetoetra: Torolàlana avo / maharitra mateza / tabataba ambany / androm-piainana lava
Speed ​​(RPM): 3.720 3.116 1.978
Amin'izao fotoana izao (A): 0,36 2.1 6.4
Torque (NM): 0 0,12 0,38
Hery famoahana (W): 0 37 80
Ny BLN5560 Fasia Fitra Rotor BLDC Motor dia namboarina manokana ary namboarina ho an'ny fitaovana elektrika mahasalama ao an-tokantrano amin'ny fiainantsika moderina. Ny BLN5560 BLDC Motor dia vita amin'ny 100% Cooper Winding ary amin'ny alàlan'ny dingana famokarana hentitra izay afaka manampy amin'ny fanalefahana ny fanaintainan'ny hozatra sy ny hamafiny. Ny BLN5560 Fascia Gun Outer Rotor BLDC Motor dia torolàlana avo lenta, faharetana avo lenta, fahombiazana tsara, hery lehibe, fanjifana herinaratra ambany, fahanginana lehibe ary androm-piainana lava.
Amin'ny alàlan'ny BLN5560 Stuter's BLotor Rotor BLDC Motor, ny Fascia Massage Gun dia hampihena ny tabataba be dia be, hanome ny fiantraikany ampy amin'ny hozatra lalina, ary hanitatra ny androm-piainany.
Ny BLN5560 BLDC Motor dia mampiasa Original Chip sy MOS Conduit hanolotra 7A Maximum Load Current ary hampihena ny angovo sy ny tabataba. Staba Eco FOC Control BLDC Motor ho an'ny Fascia dia manana endri-javatra haingam-pandeha haingam-pandeha sy haingam-pandeha ary hery lehibe ary fampiasa ambany.
Previous: BLN8520 Masinina mamaky rindrina haingam-pandeha BLDC Motor
Manaraka: BL6141 Compact ivelany rotor BLDC Fan Motor
Vahaolana Motor Fascia Gun
Inona avy ireo fitaovana fialan-tsasatra be mpitia indrindra amin'ny faribolana ankehitriny? Ny Basy Fasikia, mazava ho azy. Mandritra ny fampihetseham-batana mahery vaika, ny hozantsika dia hamokatra trauma kely, mandritra ny fanamboarana ny hozatra, ny nodule kely dia hamokatra, fantatra ihany koa amin'ny hoe "teboka fanaintainana". Ireo nodule kely ireo dia hampitombo ny viscosity an'ny fascia ary ho henjana, misy fiatraikany amin'ny maody amin'ny fihetsika sy ny fanelingelenana ny lalan-drà sy ny fikorianan'ny rà. Ny hetsika dia mety hamokatra rafitra fanonerana ankehitriny, noho izany dia tsy maintsy miala sasatra ny fascia hozatra sy ny fascia ianao aorian'ny fampihetseham-batana. Teraka tao amin'ity tontolo ity ny basy.
Tsy mitovy amin'ny mpanotra mahazatra amin'ny karazan-trano, ny otra Fascia Gun dia manalefaka ny hozatry ny vatana amin'ny alàlan'ny fikororohana mahery vaika (farafahakeliny 1800d / min, 3200d / min) farafahakeliny, izay afaka mampiala ny vatan'ny hozatra tery sy henjana. Midina, mampihena be ny fanaintainana sy ny tsy fahazoana aina aorian'ny fampihetseham-batana. Ireo dia vokatry ny moto Brushless tsy matanjaka 24V ampiasain'ny Fascia Gun, ilay motera Fascia Gun miaraka amina rafitra mihodina miisa roa. Rehefa miala sasatra ny fanorana dia afaka miditra amin'ireo vondrona hozatra ambanin'ny tany 10mm lalina izy io, ary manaparitaka tsikelikely ny asidra laktika ateraky ny fanatanjahan-tena, mitondra anao traikefa fanorana izay miditra lalina ao amin'ny vatana.
Amin'izao fotoana izao, ny ankamaroan'ny fanorana Fascia Guns eny an-tsena dia mampiasa môtô rotor ivelany tsy misy borosy miaraka amina firafitra mihodina roa. Ity basy fascia ity dia manana ny olan'ny Heavyweight sy tsy fahatomombanana, Fiainana moto fohy, faharetan'ny bateria ary tabataba avo. Ireo rehetra ireo dia ny maratra fanaintainan'ny Fascia Guns isan-karazany eny an-tsena.
Ho an'ny firafitry ny fiovan'ny toetr'andro an'ny Fascia Gun, ny tabataba dia fanombanana fanombanana lehibe amin'ny kalitaon'ny môtô ary koa singa iray manandanja ilaina hividianana vokatra. Amin'ny alàlan'ny fiantohana ny fahombiazan'ny maotera sy ny ainay, ny compact Fascia Gun Brushless DC Motor Solution mandray teknolojia vaovao sy fitaovana vaovao handresena tsy tapaka ny teknolojia fampihenana ny tabataba, hany ka ny feon'ny fiasan'ny maotera Fascia Gun dia ambany noho ny 45dB. Ity vahaolana Fascia Gun Motor ity koa dia manana ny mampiavaka azy ny habe kely sy ny Torque Avo, izay mampihena ny lanjan'ilay Fasikia Gun. Fantaro ny fampiasan'ny mpanjifa tanana iray, mba hanamorana ny fanorana.
Staba Motor dia manana traikefa mihoatra ny 10 taona amin'ny injenieran'ny fanamboarana maotera, indrindra amin'ny fampiharana Fascia Gun nanangona tahiry fitehirizam-bokatra prototype lehibe ho an'ny fanovozan-kevitry ny mpanjifa na safidy, mpanara-maso mifanitsy na encoder, haingana araka ny filàn'ny mpanjifa mba hampahahendry ny vahaolana moto hihaona na hihoatra ny fangatahan'ny mpanjifa . Staba Motor dia mpamatsy motera azo itokisana hatramin'ny taona 2009. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny vahaolana Fasikia Gun BLDC Motor, mifandraisa aminay ao amin'ny Staba Motor.
BLDC Motor ho an'ny Fasyia Gun
Brushless DC Motor ho an'ny Fasyia Gun
Motor tsy misy borosy ho an'ny basin'i Fasikia
Motor Eco BLDC ho an'ny Fasyia Gun
Motor FOC BLDC ho an'ny Fasyia Gun
Motor fanaraha-maso FOC ho an'ny Fasyia Gun
FOC Motor ho an'ny Fasyia Gun
Motor maharitra BLDC maharitra mateza ho an'ny Fasyia Gun
Motor BLDC mahomby be ho an'ny Fasyia Gun
Motor BLDC haingam-pandeha ho an'ny Fasyia Gun
Môtô BLDC avo lenta ho an'ny Basy Fasikia
Long Life Span BLDC Motor ho an'ny Fasyia Gun
Motor BLDC fanjifana ambany ho an'ny Fasyia Gun
Motor BLDC mitabataba ambany ho an'ny Fasyia Gun
Môtô ho an'ny basin'i Fasikia
BL5560 Electric Massage seza BLDC Motor
Vacuum Cleaner, BLDC Fan Motor, Motor, BLDC Motor, Motor tsy misy borosy, Brushless DC Motor, fangatahana pricelist